Dictionnaire malgache et encyclopédie de Madagascar : /bins/ohabolana/antananarivo.mg.ng.1
Proverbe Akoholahy kelin' Antananarivo : mivoaka maraina, fa tsy mitsindroka. [Veyrières 1913 #2989, Cousins 1885 #61]
Ambohimanambola no matavy omby, ka Antanamalaza no lafo kitay. [Houlder 1895 #1496, Cousins 1885 #142]
Proverbe Any Betsileo no voky tsaramaso, ka atý Antananarivo no mivozihi-kibo. [Cousins 1885 #265]
Proverbe Antananarivo no tsara trano ka Ivakiniadiana no sola vantony. [Rinara 1974 #326, Cousins 1885 #245, Rajemisa 1985]
Madio midina, toy ny andevon’ Antananarivo manasa lamba. [Cousins 1885 #1391]
Proverbe Manan-jara samy monina ny zanak’ Antananarivo, fa lakolosy no mamoha, tafondro no mampandry. [Cousins 1885 #1511]
Proverbe Mirehaka amy ny be tsy ananana, toy ny vadi-kelin’ Antananarivo. [Cousins 1885 #1812]
Sasa lamban’ Antananarivo: aleo rovitra toy izay tsy hadio. [Rinara 1974 #250, Cousins 1885 #2879, Veyrières 1913]
Proverbe Sisi-hazon' Antanamalaza: mahitsy ihany fa tonontononana; sisi-hazon' Antananarivo, sady soa no arahim-bankona. [Cousins 1885, Houlder 1895]
Tranon’ Antananarivo: izay mahavita aloha manenina. [Cousins 1885 #3270]